Rajaobelison Andriantsoa: “Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina” | NewsMada
Rajaobelison Andriantsoa: “Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina”
Par Taratra sur 21/01/2021
Taonan’ny asa ny 2021. Hanao ahoana? Maneho ny fijeriny ny filoha lefitra nasionalin’ny AKFM, Rajaobelison Andriantsoa: “Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina. Inona ny tombontsoan’ny maro anisa? Miandany amin’ny tombontsoan’iza ny fitondram-panjakana amin’ny politika ataony?” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fahitanao ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao?
Rajaobelison Andriantsoa (-): Ireo zava-miseho etsy sy eroa ireo: iza no tena mahazo tombontsoa, ny maro anisa sa ny vitsy anisa? Iza no tena maro anisa ary iza no vitsy anisa? Miainga amin’izay ny fijerin’ny AKFM ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Azo lazaina fa monina any ambanivohitra ny maro anisa amin’ny Malagasy. Misy ny mahantra amin’izany, ao ny manan-karembe.
Raha raisina isan-tokony ireo fisehoan-javatra etsy sy eroa rehetra ireo, manahirana. Ao anatin’ny fotoana anaovana fitakiana ve, ohatra, izao? Sokajin’olona toy inona no tena mahazo tombontsoa amin’ny hetsika atao? Ho anay mpanao politika, indrindra ho an’ny AKFM: inona no tena zava-kendrena ao ambadik’ireny?
* Aiza ho aiza ny toeran’ny mpanohitra amin’izany?
– Tsy mandeha irery raha ny mpanohitra eto Madagasikara, fa misy ifandraisany kely amin’ny any ivelany any izay tena tompon’ny fitantanana ny fandehan-draharaha. Satria tompon’ny fanjakan’ny vola izay mbola mampaharefo antsika eo amin’ny lafiny toekarena.
Raha tsorina: tokony hieritreritra lalina ireo manao fihetsiketsehana ireo na izay fototra iaingany. Manaraka, mba hahay handinika tsara amin’ny fo tony koa ny vahoaka. Raha misy zavatra maloto ao ambadik’ireny, fandrodanana ny fitondram-panjakana mba hahazoana miverina amin’ny tombontsoa niainany tany aloha. Ho an’ny AKFM, tsy tiana hiverina intsony izany.
* Ny fahitanao ny olana mahazo ny vahoaka amin’izao fotoana izao?
– Tsy azo ferana hoe iray ny olan’ny vahoaka amin’izao. Mahafehy zavatra betsaka, ohatra, ny hoe: tsy ampy enti-manana ny fiainana, misy aza ny tsy manana asa… Na manana aza ny tena, an’ny tena ve ny asa famokarana na izay vokatry ny asa noho ny antony tsy fandriampahalemana, ohatra? Tsy misy zavatra mandeha eto, raha tsy mandry ny tany ary milamina ny vahoaka mpamokatra. Zava-dehibe koa ny lafiny fahasalamana, fampianarana… Fototra ireo. Nefa tsy maintsy miaraka amin’ireo ny fampiharan-dalàna, izay misy fiantraikany koa amin’ny fiainam-bahoaka. Raha fehezina, laharaham-pahamehana ny zava-drehetra eto Madagasikara izay mifandray avokoa eo amin’ny fiarahamonina.
* Inona ny vahaolana amin’izany?
– Ho anay: miaro ny fiandrianam-pirenena, fanamafisana ny ady amin’ny fiverenan’ny fahaleovantena. Manaraka izany, ilaina ny fanohanana ny fitondrana tarihin’ny filoha Andry Rajoelina, amin’izao fotoana izao, satria mazava ny lalana apetrany. Ny zavatra ataon’ireo mpanohitra izay misy ifandraisany amin’ny any ivelany ny hampitoka-monina ny filoha manoloana ny vahoaka. Mba hahazoany mandrodana moramora ny fitondram-panjakana, fa ny any ivelany no mibaiko…
* Ahoana ny fijerinao ny “Raharaha volamena 73,5 kilao”?
– Na inona filazana etsy sy eroa, na avy aiza na avy aiza: aminay, volamena avy eto Madagasikara no ezahina aondrana ary anaovana tahiry enti-miady amin’ny politika eto. Tsy maintsy haverina any amin’ny Banky foibe ny volamena.
* Ahoana ny fahitanao ny mpifindra monina avy any atsimo?
– Mety mitokana ny fahitantsika azy, fa misy ifandraisany kely ireo hetsika rehetra ireo. Na ny fiantsoana ny olona avy any atsimo atao hoe mpifindra monina; na ny fiakaran’ny vidin’entana, indrindra ny vidim-bary; na ny amin’ny famatsian-jiro sy rano… Zavatra iray ihany no kendrena amin’ireo, hampitsingevahevana ny fahefam-panjakana. Tsy misy afa-tsy fitadiavana tombontsoa manokana no ao ambadik’izay. Tsy ilaozan’ny fifandonana tombontsoa ny fiarahamonina. Inona ny tombontsoan’ny maro anisa? Miandany amin’ny tombontsoan’iza ny fitondram-panjakana amin’ny politika ataony?